8.3 Noocyada qoraalka - Goofumed
8.3 Hababka qoraalka ah
Habka qoraalka ayaa si fudud u qeexaya sifooyinka noocyada kala duwan ee hoos imanaya magac gaar ah. In Autocad waxaan abuuri karnaa dhammaan noocyada aan rabno ee sawirka ka dibna waxaan u wehelin karnaa shay kasta oo qoraal ah qaab gaar ah. Xaddidaad qaraabo ah ee nidaamkan ayaa ah in qaababka la abuuray ay la wadaagaan sawirada. Laakiin haddii aan rabno inaan isticmaalno faylka hore loo abuuray ee sawir cusub, waxaa jira habab lagu soo dejiyo sida aan ku arki doono cutubka loo qoondeeyey khayraadka sawirada. Suurtagalnimada kale ayaa ah inaan samayno qaabkeena qaabka qoraalka oo aan ku dheganno template oo aan ku saleyneyno shaqooyinkeena cusub. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale wax ka bedeli karaa qaabka jira, dhammaan walxaha qoraalka ah ee isticmaala noocaas ayaa si dhaqso ah loogu casriyeyn doonaa sawirka.
In la abuuro qaab qoraal ah, waxaan isticmaali group dialogs keeb "Text" aan lagu baranayay, inkasta oo ay sidoo kale waxaa laga heli karaa liiska hoos-hoos ah Hababka ay horey u abuuray iyo sidoo kale in ay "Annotation" tab group " Guri ". Si kastaba ha ahaatee, "Maamulaha qaabka qoraalka" ayaa furmaya. Habka hore ee qeexidda waxaa lagu magacaabaa "Standard". Our talo in la "Manager Style Text" shaqeeyaan waa in aan isbedel ku style ah "Standard" haddii aad u isticmaalaan sida aasaas u ah abuurista kale oo la button "New". Fikrad ficil ah, dabcan, waa in qaabka cusub ee muuqaalku ka tarjumo ujeedada qaabka uu ku yeelan doono sawirka. Tusaale ahaan, haddii aad waxaa loo isticmaalaa in gelin magacyada waddooyinka wax qorshe fiican magaalooyinka, waxaa laga yaabaa in ay u muuqato in ay ku riday siyaado ah "Magaca wadada". Inkasta oo kiisaskaasi ay jiraan caadiyan horay u dajisay sharciyo si loogu magacaabo noocyada qayb kasta oo warshadeed ama, xataa, shirkad kasta oo aad ka tirsan tahay. By mabda 'ah oo si jawi shaqo oo iskaashi la Autocad, waxaa caadi ah in ay ka fogaadaan sawirka rumaysan in magacyada style u gaar ah kuwaas oo saamayn kara shaqada dadka kale.
Waxaa intaa dheer, in sanduuqa wada hadal waxa aad ka arki kartaa liiska noocyada lagu rakibay ee Windows. Si aad liiska astaamaha qaar ka mid ah Autocad aad si fudud u kala saari karaa leeyihiin ".shx" dheeraad ah lagu daray. noocyada Font in lagu daro la Autocad leeyihiin qaabab sahlan oo camal fiican u loogu tala galay ujeedooyinka sawir farsamo, si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli doontaa in la abuuro qaab qoraal adiga kuu gaar ah, ayaa wajahaya kala duwan oo ay ka buuxaan noocyada lagu rakibay on your computer.
Haddii waxyaabaha qoraalka abuuray style u gaar ah yeelan doontaa tirada kala duwan ee sawirka, markaa waa in sii qiimaha height sida eber in sanduuqa wada hadal. Tani waxay la macno noqon doontaa in mar kasta oo aan qoraalka ka sawirnaa xariiq, Autocad wuxuu na weydiisanayaa qiimahaas. Haddii, si kastaba ha ahaatee, dhammaan waxyaabaha qoraalka ah ee la xidhiidha style a yihiin size isla, ka dibna waxa ay ku raacsan ayaa tilmaamaya, this badbaadin doonaa waqti abuurista waxyaabaha qoraalka, iyo in aan la soo qabto ilaa si joogto ah.
Kaalay ilaa dhibtan, waxaan ku aragnaa fiidiyaha "Maamulaha qaababka qoraalka".
Waxaa inta badan u dhacdaa in size qoraalka waa mid waxtar leh marka sawirka, ma habboona marka sawirka isku qaadataa bandhigid in la ogan ama daabacay elektaroonig ah, theme aan ku aragno cutubyada 29 iyo 30, sida in qaar ka mid ah haddii qoraalka noqon karaa mid aad u yar ama aad u weyn, oo noo qasbi doono in ay la qabsato size oo ka mid ah waxyaabaha qoraalka kala duwan oo ka mid ah sawir, kaas oo noqon kara cajiib adag inkastoo isticmaalka hababka qoraalka. Waxaa jira xalal kala duwan oo lagu xallinayo dhibaatada. Mid ka mid ah u isticmaali lahayd amarka in ay qaaddo size ee qoraalka, laakiin ay khasaare ugu weyn waa in ay ku lug leedahay xulashada waxyaabaha qoraalka kala duwan in la beddelo, la halista ah ee kantaroolka ee qaar ka mid ah oo ka murugoodo natiijada. Xalka labaad wuxuu noqon karaa qaab abuur ah oo leh cabbir go'an, oo dhererkiisu sarreeyo. Marka la samaynayo bandhigyada daabacaadda, waxaynu hagaajin karnaa cabbirka qoraalka iyadoo la baddalayo qaabka loo isticmaalo. Dhinaca kale waa in qoraalka oo dhan u diidan canshuurta lahaa in la kala xajmi for style (ama hababka) loo isticmaalo (s).
Hindisaha by xal Autodesk loo yaqaan "hantida annotative" kaas oo, mar firfircoonaan for walxaha text abuuray qaabka, si fudud oo dhaqso beddeli kartaa miisaanka of walxaha kuwan, sidoo kale, waayo, meel model, taas oo ay tahay sawir, ama goobta bandhigga ka hor inta aan la sawirin sawirka. Sida beddelidda miisaanka shayga qoraalka, in walxaha kala duwan leenahay kala duwan warqad kasta oo kale, sida mid kasta oo ku haboon cabbirka cusub oo la cayimayo adigoo kala saami in size u dhaxeeya. Sidaa darteed, la soco in waxaa quman in aad dhaqaajiso guriga annotative oo ka mid ah hababka cusub ee qoraalka ah in aad la abuuro, si aad u beddeli kartaa baaxadda soo bandhigay waxyaabaha ay ku sugan meelo kala duwan oo aad barbaro (hababka ama soo bandhigga, kaas oo lagu bartay doonaa wakhtigaaga), iyada oo aan loo baahneyn in dib loogu habeeyo.
Dhinaca kale, ilaa xad inta badan ku xiran hantida annotative sida walxaha cabbir, godobihii, dulqaadka, madaxda kala duwan, blocks iyo sifooyinka, iyo sidoo kale waxyaabaha qoraalka, sidoo kale waxay yeelan doonaan, in kastoo , asal ahaan, waxay u shaqeysaa isla kiisaska oo dhan. Sida daraasadda si faahfaahsan ka dib markii aan dib u eego faraqa u dhexeeya model iyo meel warqad.
Ugu dambeyntii, hoose ee wada hadal aan u arki kartaa in ay jiraan waa qaybta lagu magacaabo "Raadka Gaarka ah". Saddexda doorasho bidixda uma baahna comment dheeraad ah, sababtoo ah natiijada ay u caddahay: "hoos Head," "bidix ka muuqataa" iyo "Vertical". Dhanka kale, ee "width / height" ayaa lagu wadaa sida default 1, waxa kor ku xusan, qoraalka waxaa horizontal sii ballaadhisay, hal ka yar hal qandaraasyadood. Taa baddalkeeda, "ayuu xagal uugu" silban xagal qoraalka lagu tilmaamay by qeexidda miraheeda waa eber.
Post Previous" Hore 8.2 Qoraal walxaha qoraalka ah
Post Next 8.4 Qoraalka Multi-lineNext »